AM Author, Author at Arsenal Myanmar News
About AM Author
So far AM Author has created 2529 blog entries.
ထရိုဂျန်တွေကို ပြုစုမွေးမြူရင်း နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းပွဲမှာ အနိုင်ရယူခဲ့တဲ့ အာတီတာ
By AM Author| 2020-07-26T20:17:23+00:00	July 26th, 2020|Post Match Review|
အာဆင်နယ်နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာကတော့ သူ့ကို အကျိုးမပြုဘဲ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ထပြီးဒုက္ခပေးမယ့် ထရိုဂျန်လို ကစားသမားမျိုးတွေနဲ့ ကစားကွက်ကို ဖျက်မယ့်သူတွေကို ထိန်းသိမ်းပြုစု မွေးမြူရင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းအမ်းမရိတ်က ရာသီပိတ်ပွဲစဉ်ကို ရင်တမမနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ဝတ်ဖို့ဒ်တို့ကို တန်းဆင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ဝတ်စုံသစ်နဲ့ စတင်ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နောက်တန်းမှာ လေးယောက်ခံစစ်ကို [...]
Comments Off on ထရိုဂျန်တွေကို ပြုစုမွေးမြူရင်း နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းပွဲမှာ အနိုင်ရယူခဲ့တဲ့ အာတီတာ
By AM Author| 2020-07-26T05:13:52+00:00	July 26th, 2020|News|
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ် ပါတေးအတွက် အာဆင်နယ်အသင်းဆီက ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကို ရရှိခဲ့တယ်လို့ စပိန်သတင်းရပ်ဝန်းက ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဂန်းနားလူငယ်ကစားသမား မက်တီယို ဂန်ဒူဇီ+ပေါင်သန်းအနည်းငယ်နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို စပိန်အသင်းဘက်က ပယ်ချခဲ့ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR. အသင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး အာဆင်နယ်ဆီလာချင်နေတဲ့ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကွင်းလယ်လူအတွက် ရရှိလာတဲ့ [...]
Comments Off on အက်သလက်တီကိုနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ကြား ပါတေး-ဂန်ဒူဇီ အလဲအထပ်အတွက် ဆွေးနွေးနေ
By AM Author| 2020-07-25T21:12:36+00:00	July 25th, 2020|News|
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ခံစစ်ကို ခြေစွမ်းရှိပြီး အတွေ့အကြုံမြင့်မားတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင်နေရာမှာ လိုင်လီရဲ့ ဂါဘရီယယ်လ် မာဂါလက်စ်အပြင် ဘာစီလိုနာရဲ့ ဆင်မြူယယ်လ် အမ်တီတီကိုလည်း အလိုရှိနေလို့ ပြန်လည်စောင့်ကြည့်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR. ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ဂျရတ် ပီကေးနဲ့ ကလေမွန် လွန်ဂလေတို့နောက်ကို ရောက်နေတဲ့ အမ်တီတီဟာ [...]
Comments Off on အမ်တီတီကို ပြန်လည်စောင့်ကြည့်နေပြီး စပို့တင်းချာတိတ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ခြေနည်းတဲ့ အာဆင်နယ်
By AM Author| 2020-07-25T17:13:43+00:00	July 25th, 2020|News|
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လူငယ်တောင်ပံကစားသမား ဘူကာယို ဆာကာက ကျောနံပါတ် ၇ ကို အသင်းက ပေးအပ်ခဲ့မှုအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းနဲ့ ဒီအင်္ကျီကို ဝတ်ဆင်ကစားပြီး ရှေ့က ကစားသမားကောင်းတွေရဲ့ ခြေရာကို နင်းပြီး အသင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုကို တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR. အသင်းကြီးကို ကျောနံပါတ် ၈၇ [...]
Comments Off on ကျောနံပါတ် ၇ ပေးအပ်မှုနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဆာကာ
By AM Author| 2020-07-25T09:06:38+00:00	July 25th, 2020|News|
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အသံထွက်ခဲ့ပြီး သုံးစရာ ငွေမရှိခဲ့လို့ လက်လျှော့ထားခဲ့ရတဲ့ လိုင်လီနောက်ခံလူ ဘရာဇီးလ်သား ဂါဘရီယယ်လ် မာဂါလက်စ်အတွက် ဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အာဆင်နယ်တို့ ထပ်မံကြိုးစားဖို့ ရှိနေပြီး နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ အီဒူးရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေကို တွေ့မြင်ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR. အဲဗာတန်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေကလည်း အလိုရှိနေတဲ့ အသက် [...]
Comments Off on မဆုံနိုင်သေးတဲ့ ဘရာဇီးလ်နောက်ခံလူကို ပြန်ကြိုးစားဖို့ ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ်
By AM Author| 2020-07-24T18:46:43+00:00	July 24th, 2020|News|
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ လာမယ့် အပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေဖြစ်ကြတဲ့ အလက်ဇန်းဒါး လာကာဇက်နဲ့ ပျယ်-အမ်မရိခ် အူဘာမီယန်းတို့နေရာမှာ ပြန်လည်အစားထိုးဖို့ ဝုလ်ဗာဟမ့်ပ်တန် ဝမ်းဒါးရားစ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ် ဟီမီနက်ဇ်ကို အလိုရှိနေတယ်လို့ ပြင်သစ်အခြေစိုက် Le 10 Sport က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR. [...]
Comments Off on လက်ရှိတိုက်စစ်မှူးတွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ဟီမီနက်ဇ်ကို အာဆင်နယ်အလိုရှိနေ